इजरायल जाने श्रमिकको भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, को-को भए पास ? (सूचीसहित) « Jagaran News
इजरायल जाने श्रमिकको भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, को-को भए पास ? (सूचीसहित)
Published On : 14 September, 2021 3:07 pm
काठमाडौं, भदौ २९ । रोजगारीका लागि इजरायल जाने श्रमिक छनौटका लागि लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ।सोमबार दिउँसो लिइएको अंग्रेजी भाषाको लिखित परीक्षाको नतिजा वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको हो।
लिखित परीक्षामा ६ हजार ३ सय १७ जना सहभागी भएकोमा २ हजार ३९ जना उत्तीर्ण भएका छन्।उत्तीर्ण हुनेमा १ हजार ३ सय ९५ जना महिला र ६ सय ४४ जना पुरुष छन्। भाषा परीक्षामा उत्तीर्णलाई अब उचाइ र तौल परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइनेछ।
अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदा आवेदन दिँदा पेश गरेका कागजातको सक्कल र प्रवेशपत्र लिएर एक घण्टाअगाडि नै उपस्थित हुनुपर्ने छनौट समितिले जनाएको छ।
असोज १ गतेदेखि ३ गतेसम्म उचाइ र तौल परीक्षण हुनेछ। उचाइ र तौल परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेको असोज ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैंसेपाटीमा अन्तार्वार्ता हुनेछ।
इजरायल जाने श्रमिकको तौल कम्तीमा ४५ किलो र उचाइ १.५ मिटर हुनुपर्नेछ।अन्तर्वार्ता र शारीरिक परीक्षणपछि विभागले १४ सय जना छनोट गरेर नेपालस्थित इजरायल दूतावासमा पठाउनेछ।
दूतावासले चिट्ठा प्रक्रियाबाट एक हजार श्रीमक छनोट गरेर भिसाको प्रक्रिया सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ।इजरायल जानका लागि ७ सय महिला र ३ सय जना पुरुष छनोट हुनेछन्। इजरायलले ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष लैजाने सम्झौता छ।
इजरायल जाने श्रमिकले एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। इजरायलमा सरकारले नै श्रमिक पठाउन लागेको हो। उनीहरुले इन्स्योरेन्स, भिसा, स्वास्थ्य जाँच, हवाइ टिकटलगायतका खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ।
केयर गिभरमा जानेले हप्ताको ४२ घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। नेपालीले पनि त्यहाँका नागरिकसरह नै सुविधा पाउनेछन्। इजरायलको वर्तमान तलब व्यवस्थाअनुसार एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ (स्थानीय ५३ सय अथवा १६ सय अमेरिकन डलर) मासिक कमाइ हुनेछ।
को-को भए पास ?
आउनै लाग्यो दसैँ, अग्रिम टिकट बुकिङ असोज दोस्रो सातादेखि खुलाउन प्रस्ताव
काठमाडौँ , भदौ २९ । नेपालीहरुको महान पर्व दशै आउन अब लगभग एक महिना मात्रै
माओवादी केन्द्रले बोलायो स्थायी समिति बैठक, के छ एजेण्डा ?
काठमाडौ, भदौ २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। सदनमा भइरहेको अवरोध
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा, भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत
काठमाडौं, भदौं २९ । रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
काठमाडौं, भदौ २९ । रोजगारीका लागि इजरायल जाने श्रमिक छनौटका लागि लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजा
आईसीसी एकदिवसीय वरियतामा नेपालको एक स्थान सुधार
काठमाडौं,भदौ २९ । नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा एक स्थानमा सुधार गरेको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट